China Gorosi Flour Mill Factory, Gorosi Flour Mill Mutengesi
Yakananga gorosi furawa mill
The Flour Mill Equipment yeCompact gorosi furawa chigayo muchina weicho chose chirimwa chakagadzirwa uye kumisikidzwa pamwe nesimbi mamiriro mamiriro. Iyo huru yekutsigira chimiro chakagadzirwa nematanho matatu: iwo anotenderera mamiroiri ari pasi pevhu, masefa akaiswa padenga rekutanga, madutu uye pneumatic mapaipi ari padhoro repiri.
Izvo zvinhu zvinobva kumataundi anotenderera anosimudzwa ne pneumatic yekuendesa system. Mapaipi akavharirwa anoshandiswa kufefetedza uye kubvisa guruva. Kureba kwemusangano kwakadzikira kudzikisa kudyara kwevatengi. The azvikuya zvemichina zvinogona kugadziridzwa kugutsa vatengi 'siyana zvinodiwa. Inesarudzo PLC yekudzora sisitimu inogona kuona yepakati kudzora ine yakakwira degree of otomatiki uye kuita oparesheni kuve nyore uye kusanduka. Wakavharirwa kufefetedza kunogona kudzivirira guruva kurasira kuchengetedza yakakwira hutsanana yekushanda mamiriro. Iyo yose chigayo inogona kusunganidzwa yakaiswa mudura uye magadzirirwo anogona kuve akagadziriswa sekuenderana zvakasiyana zvinodiwa.